GHV-12G / 630 Breaker yesekethe ye-C-GIS (ngoQhagamshelo, ngaphandle kweNdlebe)
◆ Sebenzisa imiGangatho yokuphakama: ≤2000m; Iqondo lobushushu lomoya: -45 ℃ ~ + 50 ℃; Ukufuma Relative: avareji mihla ≤95%, umyinge ngenyanga ≤90%; Ayilulungelanga ufakelo apho kukho ukungcangcazela rhoqo kunye nobunzima, umphunga wamanzi, irhasi, iidiphozithi ezonakalisayo, ityuwa yokutshiza, uthuli kunye nokungcola, kunye nomlilo kunye nokuqhushumbiswa kwengozi echaphazela ngokucacileyo ukusebenza kwendlela. Uxinzelelo lwegesi engu-SF6 yi-0.04MPa, kwaye igesi ye-SF6 iyahlangabezana neemfuno ze-GB / T 12022-2014 “Kwi ...
I-GHV-12/630 Breaker yeSekethe yeC-GIS (ngaphandle kokuQhawula, ngaphandle kweNdlebe)
◆ Sebenzisa imiGangatho yokuphakama: ≤2000m; Iqondo lobushushu lomoya: -45 ℃ ~ + 50 ℃; Ukufuma Relative: avareji mihla ≤95%, umyinge ngenyanga ≤90%; Ayilulungelanga ufakelo apho kukho ukungcangcazela rhoqo kunye nobunzima, umphunga wamanzi, irhasi, iidiphozithi ezonakalisayo, ityuwa yokutshiza, uthuli kunye nokungcola, kunye nomlilo kunye nokuqhushumbiswa kwengozi echaphazela ngokucacileyo ukusebenza kwendlela. Uxinzelelo lwe-SF6 yegesi eyi-0.04MPa, kwaye igesi ye-SF6 iyahlangabezana neemfuno ze-GB / T 12022-2014 "Ind ...
GHV2-12GD / 630 Breaker weSekethe yeC-GIS (ngoQhagamshelo, nge-Earthing)
GHV1-12GD / 630 Breaker weSekethe yeC-GIS (ngoQhagamshelo, nge-Earthing)
GHNV-12/1250 Breaker yeSekethe yeC-GIS (uhlobo olutsha)
◆ Sebenzisa imiGangatho yokuphakama: ≤2000m; Uxinzelelo lwenyikima: class8 iklasi; Iqondo lobushushu lomoya: -30 ℃ ~ + 40 ℃; Ukufuma Relative: avareji mihla ≤95%, umyinge ngenyanga ≤90%; Ayilulungelanga ufakelo apho kukho ukungcangcazela rhoqo kunye nobunzima, umphunga wamanzi, irhasi, iidiphozithi ezonakalisayo, ityuwa yokutshiza, uthuli kunye nokungcola, kunye nomlilo kunye nokuqhushumbiswa kwengozi echaphazela ngokucacileyo ukusebenza kwendlela. Iiparameter zobuchwephesha eziphambili NO. Ixabiso lento yexabiso 1 ilinganiswe ngevol ...
I-GHNG-12/1250 yokuCima ukutshintsha kwe-C-GIS (indawo ezi-3 zokusebenza) (uhlobo olutsha)
◆ Sebenzisa imiGangatho yokuphakama: ≤2000m; Uxinzelelo lwenyikima: class8 iklasi; Iqondo lobushushu lomoya: -30 ℃ ~ + 40 ℃; Ukufuma Relative: avareji mihla ≤95%, umyinge ngenyanga ≤90%; Ayilulungelanga ufakelo apho kukho ukungcangcazela rhoqo kunye nobunzima, umphunga wamanzi, irhasi, iidiphozithi ezonakalisayo, ityuwa yokutshiza, uthuli kunye nokungcola, kunye nomlilo kunye nokuqhushumbiswa kwengozi echaphazela ngokucacileyo ukusebenza kwendlela. Iiparameter zobuchwephesha eziPhambili NO. Ixabiso leCandelo le-1 lilinganisiwe ...
I-GHNG-12/630 yokuCima ukutshintsha kwe-C-GIS (uhlobo olutsha)
I-GHNF3-12 / 630 switch yokuTshintshela iC-GIS (iZithuba ezi-3 eziSebenzayo) (uhlobo olutsha)
◆ Sebenzisa imiGangatho yokuphakama: ≤2000m; Uxinzelelo lwenyikima: class8 iklasi; Iqondo lobushushu lomoya: -30 ℃ ~ + 40 ℃; Ukufuma Relative: avareji mihla ≤95%, umyinge ngenyanga ≤90%; Ayilulungelanga ufakelo apho kukho ukungcangcazela rhoqo kunye nobunzima, umphunga wamanzi, irhasi, iidiphozithi ezonakalisayo, ityuwa yokutshiza, uthuli kunye nokungcola, kunye nomlilo kunye nokuqhushumbiswa kwengozi echaphazela ngokucacileyo ukusebenza kwendlela. Iiparameter zobuchwephesha eziPhambili NO. Ixabiso leYunithi yexabiso 1 lilinganisiwe v ...
I-GHG-12/630 Cima iTshintsho kwi-C-GIS
I-GHF3-12 / 630 yokuTshintshela ukuTshintshela iC-GIS (iZithuba ezi-3 eziSebenzayo)
I-GHF2-12 / 630 yokuTshintshela ukuTshintshela iC-GIS (iZithuba ezi-2 eziSebenzayo)